Feno Olona Mafy Be Eto Madagasikara | Gasy ImpACT
Nony nandeha ny resaka dia fantatra fa toa hoe mpamily sy mpanara-dia (escorte) olona manam-pahefana ambony eto amin’ny firenena hono ity zalahy tonga fofona be ity.
Nalainy ny antonta-taratasin’ny fiaran-dRanamana ary nilaza izy fa mbola hihaona ry zareo fa tsy ho vita mora ity resaka ity…Aleo hajanona eo ny tantara fa mba lasa ihany ny saina hoe fa ahoana marina izy ity e? Santionany iray ao anatin’ny trangan-javatra betsaka faheno sy fahita ihany ity nahazo an’ilay Ranamana ity.
Sao ary dia tokony havoaka amin’ny gazeti-panjakana koa ny lisitra misy ny anarana miampy ny sarin’ireo mpamily, mpiambina, mpiasa-panjakana isan-tsokajiny sy ny havan-dry zareo tsy mahatsindry fo rehetra mba ataon’ny olon-tsotra rehetra tsianjery ny mombamomba azy ireo ka rehefa sendra azy ireny isika ka manontany ry zareo hoe: “Tsy fantatr’ialahy angaha ‘zaho?” dia mba misambotra an’ilay gazety avy hatrany isika dia mba misy havaly angamba. Ohatrany tena zava-dehibe loatra amin-dry zareo mantsy ny fipetrak’ilay fanontaniana…
Manam-pahefana daholo izao bodo sy adala rehetra izao
Ny mampiomehy sy maha-krizy amin’ny resaka sahala amin’izao dia toa lasa manam-pahefana daholo ny olona rehetra amin’izao. Na iza izy na iza ka manana fifandraisana mivantana na ankolaka amina manam-pahefana iray dia milaza izy ary mihevitra ho manam-pahefana ihany koa. Na ny sakaizan-dRakoto na ny zana-drahalahin’ny mpamilin’ny sakaizan-dRakoto dia mihevitra sy manao azy ho manana fahefana mitovy amin-dRakoto daholo. Lasa “mafy be” daholo na ny tsy misy hapoaka aza. Hany ka lasa fiteny lamôdy mahazatra ny hoe: “Tsy fantatr’ialahy angaha ‘zaho?”. Aiza moa no handeha amin’ny laoniny ny fiaraha-monina eto amin’ny tanàna?
Ilay fahefana ve izany eto amintsika dia na entina hanangonan-karena na entina hisehosehoana sy hanaovana tsindry azo lena fotsiny? Samy mandrovi-tsihy manao izay ho afany daholo eto. Tsy mahagaga raha hiadivana ny seza politika eto amin’ny tanàna: samy te ho “mafy be” daholo ny tsy mahatsindry fo rehetra. Raha mafy be anie ianareo azafady maninona moa raha hasehonareo ny fahaiza-manao hanananareo amin’ny fampandrosoana an’ity firenena ity, na porofoinareo amin’ny asa mivaingana ho hita-poko hita-pirenena ny zavatsoa vitanareo. Toa ny fomba ratsy no maha-kinga anareo fa tsy ny hanasoa ny mpiara-belona. Lasa firinga-mihevitra fotsiny no fihetsika asehonareo: tongo-bakivaky ka sady maharary no mahamenatra. Tongava saina – mba mieritrereta! Mananà fanentren-tena. Ny mahery tsy maody tsy ela velona!
Cette entrée a été publiée le mercredi 31 décembre 2014 à 9:37 et taguée Ady seza, Fahefana, fiaraha-monina malagasy, Firinga mihevitra, Fisehosehoana, Mafy be, Mahery tsy maody tsy ela velona, Mpanao politika, Tsetsatsetsa tsy aritra et publié dans Lahatsoratra Malagasy, Politique, Social, Uncategorized.	Vous pouvez suivre les commentaires liés à cette entrée par flux RSS 2.0.
" Tourisme – Destination Madagascar: La publicité ne peut vendre que ce qui est vendable
Népotisme et Corruption: Ingrédients de la Justice Populaire à Madagascar »
2 responses to “Feno Olona Mafy Be Eto Madagasikara”
raha misy olona manao izany @nao dia mora ny valiny de hoe fatatro avitaiza moa ianao , ianao tsihavako no tsihinoko ,. sady tsitaovako no tsivolovoloko .
Fangoronan-karena : Ny Vola No Maha-Olona | Gasy ImpACT
31 décembre 2014 at 10:35
[…] no lasa laharam-pahamehana ka misongona ny toeran’ny Soatoavina rehetra dia tsy mahagaga raha ny didin’ny be sandry sy ny mpanao lalankita-kisoa no […]